Google Dudziro Inowedzera Rutsigiro rweKamera yeKamera ipapo kubva kuChirungu kuenda kuChinese | IPhone nhau
Google Dudziro inowedzera rutsigiro rwekushandura kamera ipapo kubva kuChirungu kuenda kuChinese
Muturikiri weGoogle ave mumwe weanoshandiswa zvakanyanya nevashandisi vese vane tsika yekugara vachiziva mumitauro isiri iyo yemuno. MuApp Store tinogona kuwana nhamba hombe yekushandisa iyo tibvumire isu kushandura ese mazwi uye zvinyorwa. Mamwe acho anowanikwa kurodha mahara uye anotibvumidza kuti tishandure pa internet.
Vamwewo, zvinoda kuti titore maduramazwi akazara kukwanisa kuita shanduro dzemhando yepamusoro. Mwedzi mishoma yapfuura muturikiri weGoogle akagadziridzwa achiwedzera rutsigiro rwekushandura nekukasira kuburikidza nekamera, asi chete kune mitauro mishoma, inosanganisira Spanish, Russian, German, Italian, French uye Italian.
Chirongwa cheGoogle Dudziro chawana mutsva, kuwedzera imwe sarudzo kutsva kushandura nekamera: kubva kuChirungu kuenda kuChinese. Asi yakawedzerawo huwandu hwemitauro iyo yatinogona kushandisa chishandiso pasina kukosha kweinternet yekubatanidza, rakanakira basa kuti tikwanise kushandisa sevhisi iyi patinoenda kunze kwenyika.
Asi pamusoro pezvo, Google yakawedzerawo huwandu hwemitauro inogona kushandurwa neapplication. Mushure meichi chiitiko, Google Dudziro yave kugona kududzira mitauro 103. Mitauro yatinogona kushandura neGoogle Dudziro ndeiyi: Afrikaans, Albanian, German, Amharic, Arabic, Armenian, Azeri, Bengali, Belarusian, Burmese, Bosnian, Bulgarian, Cambodian, Kannada, Catalan, Cebuano, Czech, Chichewa, Chinese (Yakarerutswa), Chinese (chinyakare), Sinhalese, Korean, Corsican, Haitian Creole, Croatia, Danish, Slovak, Slovenian, Spanish, Esperanto, Estonia, Basque, Finnish, French, Frisian, Scottish Gaelic, Welsh, Galician, Georgian, Greek , Gujarati, Hausa, Hawaiian, Hebrew, Hindi, Hmong, Dutch, Hungarian, Igbo, Indonesian, English, Irish, Icelandic, Italian, Japanese, Javanese, Kazakh, Kyrgyz, Kurdish, Lao, Latin, Latvian, Lithuanian, Luxembourgish, Macedonian , Malayalam, Malay, Malagasy, Maltese, Maori, Marathi, Mongolian, Nepali, Norwegian, Punjabi, Pashto, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Samoan, Serbian, Sesotho, Shona, Sindhi, Somali, Swahili, Swedish, Sundanese , Tagalog, Thai, Tamil, Tajik, Telugu, Turkish, Ukrainian, Urdu, Uzbek, Vietnamese, Xhosa, Yiddish, Yoruba , Zulu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » App store » Google Dudziro inowedzera rutsigiro rwekushandura kamera ipapo kubva kuChirungu kuenda kuChinese
Gboard ndiyo itsva Google keyboard yeIOS ine yakasanganiswa yekutsvaga injini
iOS 9 zvitoro mukugamuchirwa sezvinoita kutengesa